Momba anay - Qingdao Topwell Chemical Materials Co., Ltd.
Qingdao Topwell Chemical Materials Co., Ltd. naorina tamin'ny 2014, dia mpamatsy matihanina mirotsaka amin'ny fikarohana, varotra ary loko manokana sy loko manokana izay misy ifandraisany amin'ny karazana hazavana-- hazavana UV, akaikin'ny hazavana infrared (IR), hazavana hita maso.
Ny vokatray lehibe dia ahitana,
1. UV / pigment fluorescent sy loko,
2. Lokon-tsofina afangaro infrared
3. Lokon-tsary sy pigmentika
4. Loko azo jerena
5. pigmento thermochromic.
Izahay koa dia manome sy manamboatra ireo loko sy pigmenta ireo, lokon'ny photochromic ho an'ny solomaso optika sy ny varavarankely na ny sarimihetsika fiara, ny lokon'ny fluorescent avo lenta ho an'ny sarimihetsika trano maintso sy ny faritra manokana an'ny fiara, ny lokon'ny UV fluorescent ary ny pigment IR ho an'ny indostrian'ny fanontana fiarovana, akaikin'ny loko mandoko infrared , mpitrandraka jiro manga, loko sivana, mpanelanelana simika, loko vita amin'ny asa, loko marefo.
Ny vokatray dia amidy tsara any Etazonia, Alemana, Frantsa, Brezila, Japon, ary firenena na faritra hafa. Malaza amin'ny kalitao avo lenta, ny vidin'ny fifaninanana, ny asa-tanana voalohany izahay, ny fonosana azo antoka ary ny fandefasana azy haingana.
Izahay dia mandray tsara ireo namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hitsidika ny orinasanay ary hiara-hiasa aminay amin'ny alàlan'ny tombontsoa maharitra.